Umvelisi kunye noMvelisi weTPU oGqwesileyo ogqibeleleyo kunye | Yilibao
XPE Non-ityhefu Eco-friendly Dlala Mat
Izinto ezingenabungozi kunye ne-eco-friendly: I-TPU yokusonga imethi yenziwe nge-TPU ekhuselekileyo, eco-friendly kwaye ingekho yityhefu kumntwana.
malunga ne-6 kg / isiqwenga
1. Uluhlu olubanzi lobulukhuni: Ngokutshintsha umlinganiso wempendulo nganye ye-TPU, iimveliso ezinobunzima obahlukeneyo zinokufunyanwa, kwaye njengoko ubunzima busanda, imveliso isagcina ukuqina okuhle kunye nokunxiba ukumelana.
2. Amandla oomatshini aphakamileyo: Iimveliso ze-TPU zinokuthwala umthwalo omkhulu, ukumelana nefuthe kunye nokusebenza kokutsalwa kukothuka
3.Ukuchasana okubandayo okugqwesileyo: I-TPU ineglasi yokutshintsha kweglasi esezantsi kwaye igcina u-elasticity, ubhetyebhetye kunye nezinye iipropathi ezibonakalayo ku-35 degrees.
Ukusebenza kakuhle kokulungiswa: I-TPU ingaqwalaselwa ngeendlela eziqhelekileyo zokwenza izinto ze-thermoplastic, ezinje ngokubumba ngenaliti, i-extrusion kunye ne-calendering. Kwangelo xesha, i-TPU ingaqwalaselwa ngeepesenti ezithile eziphezulu zezinto zokufumana ii-alloys zepolymer ezineempawu ezizezinye.
Umbutho uphakamisa ifilosofi "Yiba nguNo. 1 kumgangatho ophakamileyo, usekwe kumgangatho wokuthenga ngetyala kunye nokuthembeka kokukhula", iya kuqhubeka nokusebenzela abathengi abaphelelwe lixesha nabasekhaya abasuka phesheya kolwandle ngokufudumeleyo kwiiQuots zaseTshayina kuMgangatho woMntwana wokuKhasa , Ukuba ulwazi oluthe kratya luyafuneka, khumbula ukusitsalela umnxeba nangaliphi na ixesha!
Quots for China Baby Play Mat and Play Mat ixabiso, Emva kweminyaka 'ukudala nokuphuhlisa, kunye eziluncedo iitalente abaqeqeshiweyo abaqeqeshiweyo kunye namava okuthengisa osisityebi, impumelelo ebalaseleyo zenziwa ngokuthe ngcembe. Sifumana igama elihle kubathengi ngenxa yemveliso yethu esemgangathweni esemgangathweni kunye nenkonzo yasemva kwentengiso entle. Sinqwenela ngokunyanisekileyo ukudala ikamva eliqaqambileyo kunye nokuchuma kunye nabo bonke abahlobo basekhaya nakwamanye amazwe!
Sebenzisa ibhegi engalukanga kunye nebhokisi ukupakisha ukhuko
Egqithileyo Ukudlala Mat
Okulandelayo: I-XPE yokusonga iMat (icinezelwe i-Edge)
Tpu amagwebu Baby Mat
Tpu amagwebu Mat
EPE Material Dlala Mat